နဂါးလှေများ လူသူကင်းမဲ့နေ ၊ ကောက်ညှင်းထုပ် ရနံ့က လေထဲ သင်းပျံ့ဆဲ - Xinhua News Agency
နဂါးလှေများ လူသူကင်းမဲ့နေ ၊ ကောက်ညှင်းထုပ် ရနံ့က လေထဲ သင်းပျံ့ဆဲ
တရုတ်ရိုးရာနဂါးလှေပြိုင်ပွဲကျင်းပမည့် အခါသမယတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးအစီအစဉ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် လှေပြိုင်ပွဲကျင်းပခြင်းမရှိ တော့ရာ လူသူကင်းမဲ့နေသည့် စင်ကာပူနိုင်ငံ Kallang Basin ကမ်းနားရှိ နဂါးလှေများကို ဇွန် ၁၄ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
စင်ကာပူ/ရန်ကုန် ၊ ဇွန် ၁၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
နိုင်ငံများစွာရှိ တရုတ်လူမျိုးများသည် ယခုနှစ် နဂါးလှေပြိုင်ပွဲ သို့မဟုတ် zongzi ကောက်ညှင်းထုပ်ပွဲတော် ကာလကို တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဖြင့် ကုန်ဆုံးလွန်မြောက်ခဲ့ကြကြောင်း ၊ ယခင်က နဂါးလှေပြိုင်ပွဲအခါသမယတွင် စည်စည်ကားကားဖြစ်နေသော နေရာများသည် COVID-19 ကပ်ရောဂါ ကန့်သတ်ချက်များအောက်တွင် ပုံမှန်အတိုင်း သက်ဝင်လှုပ်ရှားနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့၌ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန် ၁၃ ရက်က ဈေးဆိုင်များတွင် ရောင်းချနေသည့် အသွင်သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုး ကောက်ညှင်းထုပ် ပုံစံမျိုးစုံကို တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
သို့တိုင်အောင် မြို့ကြီးများ နှင့် လမ်းမများထက်တွင် ကောက်ညှင်းထုပ် ရနံ့သင်းပျံ့ပျံ့နှင့်အတူ နဂါးလှေပွဲတော်၏ အငွေ့အသက်များကို ဆက်လက်ခံစားနေရဆဲဖြစ်သည်။ (Xinhua)
Dragon boats may be empty, smell of Zongzi still fills the air
SINGAPORE/YANGON, June 15 (Xinhua) — In the Chinese communities of many countries, people are spendingasomewhat quiet Dragon Boat Festival this year, as the bustling and hustling of dragon boat races are not coming as usual under the restrictive measures of the COVID-19 pandemic.
Yet cities and streets are still alive with festive atmosphere, with the smell of Zongzi filling the air.
(1,2,3) Empty dragon boats are seen berth onafloating platform as part of the restrictive measures for COVID-19 measures, instead of racing in dragon boat races during the traditional Dragon Boat Festival, in Singapore’s Kallang Basin, Jun 14, 2021. (Xinhua/Then Chih Wey)
(4) – A man arranges Zongzi for sale in his store in Yangon, Myanmar, June 13, 2021 (Xinhua/Zhang Dongqiang)
(5,6,7,9) Different varieties of Zongzi on sale in Yangon, Myanmar, June 13, 2021 (Xinhua/Zhang Dongqiang)
(8) A vendor prepares Zongzi for sale in Yangon, Myanmar, June 13, 2021 (Xinhua/Zhang Dongqiang)
တရုတ်-စင်ကာပူ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ယန္တရားဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးများ ကျင်းပရန်ရှိ